AREWA24: 24-7 ee ugu horreeya xarunta telefishanka satalaytka afka Ingiriisiga ee N. Nigeria - Equal Access International
Nigeria, Waaxda Arimaha Dibadda Mareykanka
Himilada Mashruuca - AREWA24 ayaa la bilaabay sanadkii 2014 si ay u buuxiso booska ka baxay ee ah soosaarida maxaliga ah ee ay soo saartay
madadaalo luqadeed iyo barnaamijyo qaab nololeed oo ka tarjumaya kibirka nolosha Waqooyiga Nigeria, dhaqanka, muusikada, filimka, farshaxanka, karinta iyo isboorti.
Sannadkii 2013, iyadoo ay maalgelin ka heshay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee EAI ayaa markii ugu horreysay 24/7 ee afka Ingiriisiga kuhadla telefishanka ku hadla woqooyiga Nigeria. Kanaalka wuxuu lahaa laba shuruudood: wuxuu u baahnaa inuu yeesho dhisidda nabadda iyo ka hortagga xagjirnimada rabshadaha wata ee udub dhexaadka u ah barnaamijka, wuxuuna u baahday in loo gudbo ganacsiga ganacsiga gaarka loo leeyahay dhamaadka waqtiga deeqda si uu u noqdo mid waara. Si loo gaaro himiladaas hamiga leh, EAI waxay u baahneyd inay dhisto awoodda koox wax soo saar oo Waqooyiga-Waqooyiga oo dhan ah si ay u soo saarto barnaamijyo, iyo wixii ku saabsan Waqooyiga Nayjeeriya ee abuuray kibirka dhaqan iyo jiritaanka.
Magacaygu waa Ibhahim Khalil waxaan ku noolahay gobolka Katsina [waqooyiga Nigeria]. AREWA24 waxay badashaa akhlaaqda iyo anshaxa dhalinyaradeena. Tusaale ahaan, waagii hore shaqo ma aanan haysan; Waxba ma qaban. Laakiin anigoo daawanaya barnaamijyadaada, waxaan isku helay ganacsiga nijaarnimada oo hadda i siisa lacag aan ku bixiyo naftayda kuna caawiyo waalidkay.
Muddadii afarta sano ahayd, EAI waxay dhistay saldhig markii ugu horreysay xoojiyay dhaqanka hodanka ah ee woqooyiga Nigeria oo muujinaya astaamo awood u siinaya haweenka, wax ka qabta xeerarka dhaqan-bulsheed ee qoto dheer, oo ay ka muuqdeen fannaaniin soo koraya iyo fannaaniin, isboorti, bandhigyo hadal majaladeed , iyo riwaayadaha. Si loo hubiyo in barxadda aakhirka ay awood u yeelan doonto in la soo rogo oo gebi ahaanba si madax-bannaan loo maamulo, EAI waxay shaqaalaysiisay qaab ganacsi oo isku-dhafan oo isku-dhafan kaas oo u oggolaaday kanaalka inuu raadsado heerarka sare iyo xayeysiiyayaasha maxalliga ah. Marka lagu daro soosaarida madadaalada tayada sare leh iyo barnaamijyada qaab nololeedka, howlgalka ganacsiga ee AREWA24 'wuxuu xaqiijiyey heshiisyo xayeysiis ah oo lala galayo noocyada waaweyn ee adduunka sida Coca-Cola, Procter iyo Gamble, iyo Unilever.
Kooxda maxalliga ahi waxay sidoo kale bilaabeen madal warbaahinta bulshada ee adag oo awood u siineysa in nuxurka laga dhigo mid laga heli karo YouTube-ka isla markaana loo abuuro goob daawadayaasha si ay ula fal galaan barnaamijyada siinaya jawaab celin bulsheed muhiim u ah barnaamijyada riixaya dulqaad, nabad, iyo aqbalaad.
Laga soo bilaabo Ogosto 2017, shirkadda shirkadaha gaarka loo leeyahay, Network AREWA24, Ltd ("NAL"), waa shirkad 100% ah shirkad reer Nigeria ah, oo shaqeyneysa iyo kobaca Kaliya ka soo xaroota dakhliga iyo sinaanta gaarka ah maalgelinta maalgashiga. Himilada deeq bixiyaha iyo horumarka ugu weyn ee ganacsiga AREWA24, gaar-gaar, iyo joogtaynta muddada fog ayaa la gaadhay.
Waxaan ognahay in si loo sameeyo isbadal waara in barnaamijyadeenna looga baahan yahay inay noqdaan kuwo maxalli ku leh. AREWA24 waxay siisaa kuwa ka shaqeeya warbaahinta isbedelka bulshada iyo horumarinta caalamiga ah daraasad kiis oo ku saabsan saamaynta maalgashiga iyo tusaale guul leh oo iskaashi dowladeed / mid gaar loo leeyahay oo leh rafcaan ganacsi muddo dheer ah. Kaftanka waxaa iska leh kooxda AREWA24, iyo hogaaminta Agaasimaha Africa, Graham Couturier, iyo madaxa fulinta Jacob Arback.
Waxaan bilownay kanaalkan afar sano ka hor hadafkeena ah inaan abuuro masrax telefishan caalami ah oo heerkiisu sareeyo kaas oo boqolkiiba boqol sax ah waqooyiga Nigeria. Ronni Goldfarb, Aasaasaha
Barnaamijyada La Soo Bandhigay: Dadin Kowa
Xilliga hore ee 'AREWA24', abaalmarinta asalka ah ee abaalmarintu waxay sheegaysaa sheekada Dadin Kowa, oo ah magaalo khiyaali ah oo jilayaasha ugu waaweyn ay ka turjumayaan nolosha dhabta ah iyo bulshada Waqooyiga Nigeria. Ayadoo loo marayo qormooyinkan taxanaha ah, dhagaystayaashu waxay iskood u arkaan, rajadooda iyo caqabadaha jira, waxayna la xiriiraan halganka jilayaasha iyo go'aannadooda ku saabsan shaqada, qoyska, dhaqaalaha, iyo isku dhacyada. Dadin Kowa wuxuu ku guuleystey Abaalmarintii Cod Bixiyeyaasha ee Magaalooyinka 2016 ee ugu wanaagsan filimada / taxanaha telefishanka.
95 + Kun
640 + Kun
Gaarsiinta baahinta guriga
In la soo saaro habab cusub oo waara oo lagu sii wadi karo waddamada sida aadka ah ugu baahan.